काठमाडाै । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संयुक्त कार्यदलकाे बैठकले केन्द्रमा १८ अाेटा मन्त्रालय बनाउने सहमति गरेकाे छ ।
बिहीबार मन्त्रालय बाँडफाट र पार्टी एकताकाे विषयमा छलफल गर्न बसेकाे बैठकले हाल रहेकाे ३१ मन्त्रालयमध्ये घटाएर १८ मन्त्रालय बनाउन लागेकाे हाे । अहिले रहेकाे मन्त्रालय मध्ये कुन मन्त्रालय कुनमा गाभ्ने भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै टुङगाे लगाउने जनाइएकाे छ । त्यस्तै यसकै अाधारमा पछि एमाले माअाेवादीले संयुक्त रूपमा मन्त्री परीषद विस्तार गरीनेछ ।
स्राेतका अनुसार फेरी भाेली बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या पारित गर्नेछ। मन्त्रालय टुंगो भएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने समझदारी पनि भएको छ। बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक्लाएक्लै बैठक गरेका थिए ।
प्रकाशित : बिहिबार, फागुन १०, २०७४१४:०७
अझै पाएनन् भूकम्पपीडितले अनुदान
हिजो साँझ खर काटिरहेको बेला एक्कासि बाघले आक्रमण गर्दा अमृता गम्भीर घाइते !
विचौलियाबाटआएको कामलाई प्राथमिकता ! मालपोत र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनियमितता !